सामाजिकसञ्जाल Archives -
सिमा बचाउ अभियानका अगुवा देवनारायण यादवको मुद्दा थप लम्बिदै गएको छ । भारतीय प्रहरीले अपहरणको नाममा पक्राउ गरेका यादवको बाबु छोराकै सुनुवाईमा अदालतले उदासिनता देखाएको छ । यादव र उहाँका छोरा अजयकुमार यादवलाई छुटाउन आज भारतको सुपौल जिल्लास्थित बिरपुरको अनुमण्डलीय व्यबहार न्यायलयमा उहाँकी बुहारीको बयान हुने भएको छ । यादवकी बुहारी ज्योती कुमारीले मंगलवारदेखि न्यायालयमा […]
२० आश्विन २०७४, शुक्रबार २१:२२ October 6, 2017 wwwmophasalLeaveaComment on बाम तालमेल तथा पार्टी एकताबारे प्रवाशी नेपालीहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया
नेकपा एमाले र माओबाबादी केन्द्रका साथै नयाँ शक्ती नेपाल बिच भएको एकताको सहमती बारे प्रबासमा रहेका भातृ संगठनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले मिश्रित प्रतिकृया जनाएका छन् । कार्यकर्ता स्तरमा कुनै जानकारी र छलफल नै नगरिकन नेत्रित्वले सहमती गरेको भन्दै एकता र सहमतीको पक्ष र बिपक्षमा उनिहरुले मिश्रित प्रतिकृया जनाएका हुन् । आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश […]
आशिस पुरुषको सम्बन्ध छुट्यो ………….
१२ असार २०७४, सोमबार १६:२७ June 26, 2017 wwwmophasalLeaveaComment on आशिस पुरुषको सम्बन्ध छुट्यो ………….
युएईको नेपाली रंगमंचमा अग्रपंतिमा आउने एउटा नाम हो मोडल आशिस पुरुष । सायदै युएईमा नेपाली म्युजिक भिडियोहरुको सुटिंग भित्र्याउने एउटा देन आशिसलाई मान्न सकिन्छ । पछिल्लो समय यी नै मोडल आशिस पुरुषको सम्बन्ध छुटेको छ । गीतमा निकै भाबुक देखिने मोडल आशिस पुरुष केहि समय पहिले नेपालमा सुटिंग भएको गितबाट सम्बन्ध छुटेको बताउछन । उनको […]
अनलाइन जागिर कसरी खोज्ने ?
९ असार २०७४, शुक्रबार २३:४९ June 23, 2017 wwwmophasalLeaveaComment on अनलाइन जागिर कसरी खोज्ने ?
के तपाइँ आकर्षक जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ ? अनि घरमै बसी बसी आफ्नो बायोडाटा रोजगारदाता कम्पनिहरु समक्ष पुर्याउन चाहनुहुन्छ ?अब चिन्ता नगर्नुहोस् । तपाइको सुबिधाको लागी मोफसल अनलाइन टिभीले नेपाली भाषामा युएईमा रहेका १० मुख्य जागिर खोज्ने वेबसाइटको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने पुरा विवरण सहितको भिडियो गाइड सार्बजनिक गरेको छ जसको लागि तलको लिंक खुलाउनु होस् […]
२०२० सालमा, रामेछाप जिल्लाको मझुवा गाविस, वडा नं.१ मा जन्मेका श्री पञ्च योञ्जन तामाङ आफ्नो दैनिक रोजि रोटिलार्इ सहज र सरल बनाउने सिलसिलामा वैदेशिक रोजगारीता अपनाउँदै २००३ को मे महिनामा यूएइको दुबाइ शहर अन्तर्गत रहेको DRY DOCKS WORL DUBAI कम्पनीमा आइ पुगे । NEW OVERSEES म्यान पावर बाट ४८ हजार तिरेर प्रति महिना ९५०/- दिह्राम […]
१२ मंसिर २०७३, आईतवार ००:५१ November 27, 2016 wwwmophasalLeaveaComment on देश बिकासका लागि आफै बाट कदम चाल्ने कि ?
रमेस ढकाल हुन त मा कुनै economic को student होइन र Economic सम्बंदिद काम नै गर्छु ….तर मनमा लागे र हरेक दिन …Business र International ट्रेड को हल्का समाचार पदने बानी छ हामी ५० लाख youth देश बाहिर रोजगारी को लागि आयका छौ ….तर मलाई लाग्छ ५० लाख भन्दा बडी छ हाम्रो सरकार ..जैले नि […]
मोफसल सम्बाददाता – गैर आवासीय नेपाली संघ युएईले लामो समय देखि बिबादित भएको खादा विषयक प्रकरण बारे न्युज २४ टेलिभिजनमा र सामाजिक संन्जालमा प्रचारीत एवं प्रेशीत समाचार सत्य नभएको १७ नोभेम्बर, २०१६ मा एक बिज्ञप्ति प्रकासन गरेर गलत हल्लाले ध्यानआकर्षण भएको बताएको छ | खादा प्रकरण बारे अघि नै संस्थाको ध्यानआकर्षण भएको र सो बारेमा […]